ရယ်ရယုံ (၄၆) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ရယ်ရယုံ (၄၆)
Posted by etone on Oct 5, 2010 in Aha! Jokes, Satire |0comments
အိမ်ထောင်သက်နှစ်၂၀ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဧည့်ခံပွဲပြုလုပ်ပြီးနောက် ဇနီးသည်ကခင်ပွန်းဖြစ်သူအား မေး လေသည်။ ” လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်၂၀ဖြစ်တဲ့ဒီလိုနေ့မှာ ကျွန်မတို့လက်ထပ်ခဲ့ကြတယ်နော် ” ” ဟုတ်တာပေါ့ ” ” အဲဒီနေ့တုန်းက ပျော်လိုက်တာ မင်္ဂလာပွဲလာတဲ့လူတွေလည်း အများကြီး ” ” အင်း… ဟုတ်တယ် ” ” အဲဒီနေ့ကိုဘယ်တေ့ာမှမမေ့ဘူး၊ ၀မ်းသာလွန်းလို့။ ရှင်ရော… ” ” ငါလည်းဘယ်တော့မှ မမေ့ပါဘူး ” ” ပျော်လွန်းလို့လား ” ” ငါ့ဘ၀မှာ စိတ်ဆင်းရဲမှုစတင်ခဲ့တဲ့နေ့မို့လို့လေ။ ”
အမျိုးသားတစ်ဦးသည် ကွယ်လွန်သွားသောမိခင်၏ အုတ်ဂူပေါ်တွင် ပန်းအချို့တင်ကာ သူ့ကားရပ်ထားရာဆီသို့ ပြန်လျှောက်လာခဲ့သည်။ ထိုသို့လျှောက်လာရင်း အုတ်ဂူတစ်လုံးဘေးတွင် ဒူးထောက်နေသောအမျိုးသားတစ်ဦး ကိုသတိပြုမိလေသည်။ ထိုအမျိုးသားသည် သည်းလှိုက်အူလှိုက်ပူဆွေးနေသည့်ဟန်ရှိပြီး ပါးစပ်မှလည်း အောက် ပါအတိုင်းရေရွတ်ကာ ပူဆွေးနေလေသည်။ ” မင်းဘာကြောင့်စောစောသေခဲ့ရတာလဲ၊ မင်းဘာကြောင့်စောစောသေခဲ့ရတာလဲ ” ပထမအမျိုးသားသည် ထိုသူ၏အနားသို့ချဉ်းကပ်ပြီး မေးကြည့်လိုက်မိလေသည်။ ” ကျွန်တော် ခင်ဗျားရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပူဆွေးမှုကိုတော့ ၀င်ရောက်မစွက်ဖက်ချင်ပါဘူးဗျာ၊ ဒါပေမဲ့ အခုခင်ဗျား ရဲ့ နာကျင်ခံစားနေတဲ့ပုံစံမျိုး အရင်ကမတွေ့ဖူးလို့၊ ဘယ်သူ့အတွက်ဒီလောက်ထိထိခိုက်ခိုက် ပူဆွေးနေရတာလဲ၊ ခင်ဗျားကလေးအတွက်လား၊ မိဘအတွက်လား။ အဲဒီဂူထဲမှာရှိနေတာကကော ဘယ်သူလဲလို့ သိပါရစေခင်ဗျာ။ ” ” ကျွန်တော့်မိန်းမရဲ့ ပထမခင်ပွန်းပါ ” ” အဲဒါနဲ့များ ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ပူဆွေးနေရတာလဲ ” ” သူစောစောစီးစီးသေသွားတော့ သူ့ရဲ့ဒုက္ခတွေကို ကျွန်တော်က သူ့ကိုယ်စားခါးစည်းခံနေရလို့ပါ ”
>>>>ဟုတ်ကဲ့ဆရာ >>>> အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် ကျန်းမာရေးမကောင်းသော သူမ၏ခင်ပွန်းအားဆေးခန်းသို့ လိုက်ပြပေးလေသည်။ ခင်ပွန်းအား ဆေးစစ်မှုများပြုလုပ်ပြီးနောက် ဆရာဝန်ကသူ၏ရုံးခန်းအတွင်းသို့ သူမအားခေါ်ကာခင်ပွန်းသည် အတွက် တီးတိုးမှာကြားလေသည်။ ” မင်းရဲ့ခင်ပွန်းဟာ စိတ်ဖိစီးပြီး စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတယ်။ တကယ်လို့သာ ငါ့ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်ကို ဂရုတစိုက်မလိုက်နာဘူးဆိုရင် မင်းရဲ့ခင်ပွန်းဟာ ကျိန်းသေပေါက်သေမှာပဲ ” ” ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ” ” နံက်တိုင်းသူ့ကို ကျန်းမာရေးဓာတ်စာကျွေးရမယ်၊ အချိန်တိုင်းသူ့ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားရမယ်၊ ညစာကို သူ့အတွက် ကောင်းကောင်းပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးရမယ်။ ” ” ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ” ” ဝေယျာဝစ္စတွေနဲ့သူ့ကို ၀န်မပိစေနဲ့။ ပြသာနာတွေကိုလည်းသူနဲ့မဆွေးနွေးလေနဲ့၊ ဆွေးနွေးရင်သူ့အခြေအနေ ပိုဆိုးလာလိမ့်မယ်၊ သူ့ကို နားပူနားဆာမလုပ်နဲ့၊ အရေးကြီးဆုံးကတော့ သူ့ကိုအမြဲတမ်းချစ်ချစ်ခင်ခင်နေဖို့ပဲ၊ အဲဒီ လိုသာ မင်းလိုက်နာခဲ့မယ်ဆိုရင် တစ်နှစ်အတွင်း မင်းခင်ပွန်းရဲ့ကျန်းမာရေးဟာ လုံးလုံးပြန်ကောင်းလာလိမ့်မယ်” ” ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ” အိမ်အပြန်လမ်းတွင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ဇနီးသည်အား ဤသို့မေးလေသည်။ ” ဆရာဝန်က မင်းကိုဘာတွေပြောလိုက်လဲ ” ” ရှင်မကြာခင် သေရတော့မယ်လို့ပြောလိုက်တယ် ” >>>စောင့်ပါ>>>> ဂျွန်နှင့်စမစ်အမည်ရှိမိတ်ဆွေနှစ်ဦးအားလပ်ရက်တစ်ရက်၌ ငါးမျှားရင်းစကားပြောလျက်ရှိသည်။ ” အိမ်မှာနေရတာ အဆင်မပြေပါဘူးကွာ ” ” ဘာဖြစ်လို့လဲ ” ” ငါ့မိန်းမနဲ့စကားမပြောတာကြာပြီ ” ” ဟုတ်လား ” ” အဲဒါ ဒီမိန်းမကို ကွာရှင်းလိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေတယ် ” ” ကောင်းတယ် မြန်မြန်သာကွာရှင်လိုက်ကွာ ” ” ဘာဖြစ်လို့လဲ ” ” မင်းနဲ့ကွာရှင်းပြီးတဲ့အထိစောင့်ပါလို့ ငါ့ကိုပြောထားလို့ ” >>>ပိုကောင်းသွားမှာပါ>>> ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲ၏နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲ၌ ဒိုင်လူကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူတစ်ဦးက အိမ်ရောက်သည်နှင့် သူတာဝန်ယူခဲ့မှုကို သူ့ဇနီးအား ပြောပြလေသည်။ ” ဒီနေ့ဘောလုံးပွဲကြည့်သေးလား ” ” ကြည့်တာပေါ့ ” ” ဘောလုံးသမားတွေ ကစားတာကြမ်းတော့ အတော်လေးထိန်းခဲ့ရတယ် ” ” အင်း ” ” ပွဲကလည်းကောင်းတယ်ကွာ ” ” ဟုတ်တယ် ” ” ငါဘောလုံးပွဲကြီးကြပ်တာ ကောင်းတယ်မဟုတ်လား ” ” အမှန်အတိုင်းပြောရရင်… ” (ဇနီးသည်က စကားကိုဆက်မပြောပဲရပ်ထားရာ) ” ပြောလေကွာ အမှန်အတိုင်းပြောစမ်းပါ ” ” ရှင်မပါရင်အဲဒီပွဲက ဒီ့ထက်ပိုကောင်းသွားမှာ ” >>>တူလိုက်တာနော်>>> ဘောလုံးပွဲများကြည့်လွန်းသဖြင့်ဇနီးဖြစ်သူနှင့်စိတ်အခန့်မသင့်ဖြစ်နေသည့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူသည်ဇနီးဖြစ်သူမီးဖွား ကြောင်း တယ်လီဖုန်းဝင်လာသဖြင့် ဆေးရုံသို့အမြန်လိုက်သွားခဲ့သည်။ ” စိုးရိမ်လိုက်တာ၊ နေကောင်းရဲ့လား ” ” ကောင်းပါတယ် ” ” သားလေးဆိုတော့ ကိုယ်ဝမ်းသာလိုက်တာကွာ ” ” ဟုတ်တယ် ” ” ကလေးလည်းကျန်းမာတယ်လို့ ဆရာဝန်တွေကပြောတယ်မဟုတ်လား ” ” ကျန်းမာတယ် ဘာရောဂါမှမရှိဘူးတဲ့၊ သားလေးကိုကြည့်စမ်း ဘယ်သူနဲ့တူလဲဟင် ” ” ကိုယ့်သားလေးက စီရိုနယ်ဒိုနဲ့တပုံစံတည်းပဲနော်… ” >>>နှစ်၂၀ပြည့်ပြီလေ>>> အမျိုးသမီးတဦးသည် ညသန်းခေါင်အချိန်မှအိပ်ရာမှနိုးလာစဉ် ခင်ပွန်းဖြစ်သူအိပ်ရာထဲတွင်မရှိသည်ကို သိလိုက် ရလေသည်။ ထို့ကြောင့် သူမအောက်ထပ်သို့ဆင်းခဲ့ရာ မီးဖိုချောင်အတွင်းရှိစားပွဲတွင် ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုရှေ့၌ချ လျက်ထိုင်နေသော ခင်ပွန်းသည်အားတွေ့လိုက်ရလေသည်။ သူသည်ရှေ့ရှိနံရံကိုစိုက်ကြည့်ကာ အတွေးနယ်ချဲ့ လျက်ရှိသည်ကို သူမတွေ့လိုက်ရပြန်သည်။ ထို့အပြင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူမျက်ရည်သုတ်ပြီး ကော်ဖီတစ်ငုံသောက် လိုက်သည်ကိုလည်း သူမတွေ့လိုက်ရသဖြင့် သူမသိလိုသည်ကိုမေးလိုက်သည်။ ” ဘာဖြစ်လို့လဲ ယောက်ျားရေ ဒီအချိန်ကြီးကျမှ ဘာဖြစ်လို့ အောက်ဆင်းထိုင်နေရတာလဲ ” ” ဟိုး… လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်၂၀တုန်းက မင်းအသက်၁၆နှစ်အရွယ်မှာ မင်းနဲ့ကိုယ်ချိန်းတွေ့ခဲ့ကြတာ မင်းမှတ်မိရဲ့လား ” ” မှတ်မိတာပေါ့ ” “အဲဒီတုန်းက ကိုယ့်ကားရဲ့နောက်ခန်းမှာရှိနေကြတဲ့မင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုမင်းအဖေမိသွားတာကိုလည်းမှတ်မိသေးလား” ” ဒါလည်းမှတ်မိတာပဲ ” ” အဲဒီအချိန်မှာ မင်းအဖေက ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုသေနတ်နဲ့ချိန်ပြီး မင်းငါ့သမီးကိုယူရင်ယူ၊ မယူရင်ထောင်ထဲမှာ နှစ်၂၀နေရစေ့မယ်လို့ပြောခဲ့တာလည်း မှတ်မိဦးမှာပေါ့ ” ” သိပ်မှတ်မိတာပေါ့ ” ခင်ပွန်းသည်က သူ၏ပါးပြင်ပေါ်သို့ကျနေသော မျက်ရည်ကိုထပ်သုတ်ရင်း ပြောလိုက်သည်မှာ ” ဒါဆို ဒီနေ့ကိုယ်မင်းနဲ့နေခဲ့တာ နှစ်၂၀ပြည့်ပြီဖြစ်လို့ ကိုယ်ထွက်သွားလို့ရပြီပေါ့ ” “ဘာရယ် ” >>>ဖြစ်ပုံက>>> နယူးယောက်မြို့မှ လေ့ာစ်အိန်ဂျလိစ်မြို့သို့ ပျံသန်းလာသောခရီးသည်တင် လေယာဉ်တစ်စင်းပေါ်တွင် လေယာဉ် မှူး၏ အသံထွက်ပေါ်လာသည်။ ” ကျွန်တော်တို့ ခရီးသည်တင်လေယာဉ်ဟာ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့သို့ဦးတည်ပျံသန်းနေပါတယ် ” ” ခါးပတ်ဖြုတ်လို့ရပြီလား ” ” ဟုတ်ကဲ့ အခုချိန်မှာခါးပတ်တွေဖြုတ်ပြီး အေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရပါပြီ ” ” ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ” နောက်မိနစ်၂၀ခန့်ကြာသော်… ” ခရီးသည်များခင်ဗျား ကျွန်တော်တို့လေယာဉ်ကို ဆီမဖြည့်ခဲ့မိပါဘူး။ ခါးပတ်များပြန်ပတ်ပြီး အသင့်သာပြင်ထား ကြပါတော့ ” >>>ဒါကြောင့်ပါ>>> အကြိတ်အနယ်ယှဉ်ပြိုင်ကစားရသည့်ဗိုလ်လုပွဲကို ကြီးကြပ်ခဲ့ရသည့်ဒိုင်လူကြီးအား ဘောလုံးပွဲအပြီးတွင် သတင်း ထောက်တစ်ဦးက တွေ့ဆုံမေးမြန်းလေသည်။ ” ဒီနေ့ပွဲက အကြိတ်အနယ်ရှိပြီး ပွဲကောင်းတစ်ပွဲလို့ထင်ပါသလား ” ” စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ပွဲပါပဲ ” ” ဒီပွဲမှာ နှစ်ဖက်ကစားသမားတွေ ကစားပုံနည်းနည်းကြမ်းတယ်နော် ” ” အနိုင်ရလိုစိတ်နဲ့ပါ ” ” ဒီလောက်ပွဲကြမ်းနေပေမယ့် အ၀ါကတ်၊ အနီကတ်တွေထုတ်မသုံးခဲ့ဘူးနော်… အဲဒါ… ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ… ” ” နှစ်ကတ်စလုံး အိမ်မှာမေ့ကျန်ခဲ့လို့ပါ ” >>>အကြံပြုလိုက်ပုံက>>> Company ပိုင်ရှင်သူဌေး၏ မော်တော်ယာဉ်ပျောက်ဆုံးသွားသဖြင့် မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်ကို သူ၏မန်နေဂျာ များနှင့်ဆွေးနွေးရာ သူဌေး ။ ။ စီမံမန်နေဂျာ အကြံဥာဏ်ပေးပါဦး… စီမံမန်နေဂျာ။ ။ ရဲစခန်းကိုအကြောင်းကြားသင့်ပါတယ်သူဌေး သူဌေး ။ ။ အင်း… ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်…ကဲ အုပ်ချုပ်မှုမန်နေဂျာ ပြောပါဦးခင်ဗျာ အုပ်ချုပ်မှုမန်နေဂျာ။ ။ သံသယရှိတဲ့ လူတွေစာရင်းပြုစုပြီး ရဲစခန်းကိုပေးလိုက်တာကောင်းမယ် သူဌေး ။ ။ ဒါလည်း စဉ်းစားသင့်တဲ့အချက်ပါပဲ။ ကဲ…ငွေစာရင်းမန်နေဂျာကကောဘယ်လိုသဘော ရလဲ ငွေစာရင်းမန်နေဂျာ။ ။ သူဌေးရဲ့ ဘဏ်စာရင်းကို ကြည့်လိုပါတယ် သူဌေး ။ ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ငွေစာရင်းမန်နေဂျာ။ ။ ကားအသစ်တစ်စီးဝယ်ဖို့ မှတ်ချက်ပြုမလို့ပါ >>>ရပါတယ်>>> Company ပိုင်ရှင်တစ်ဦးက မန်နေဂျာရာထူးအတွက် လျှောက်ထားသူသုံးဦးအား လူတွေ့စစ်ဆေးမေးမြန်းလျက် ရှိရာ ထိုရာထူးအတွက် အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရတစ်ဦး၊ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးနှင့် စာရင်းအင်းကျွမ်းကျင်သူ တစ်ဦးတို့အား မေးခွန်းမေးရာ ပိုင်ရှင်။ ။ ၂နဲ့၂ပေါင်းရင် ဘယ်လောက်ရလဲ… အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရ။ ။ ကိန်းဂဏန်းများတွက်ချက်နိုင်သည့်ပေတံကိုအိတ်ထဲမှထုတ်ကာစစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီး ၄ရပါတယ်ဆရာ။ ပိုင်ရှင်။ ။ ခင်ဗျားကရော ၂နဲ့၂ပေါင်းရင် ဘယ်လောက်ရလည်းပြောပါဦး…. ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သူ။ ။ အိတ်ထဲမှဂဏန်းပေါင်းစက်ကိုထုတ်ကာခလုတ်များနှိပ်ပြီးနောက် ၄ရပါတယ်ဆရာ ပိုင်ရှင်။ ။ ကဲ…. ခင်ဗျားလည်းပြောပါဦး….. စာရင်းအင်းသမား။ ။ ပိုင်ရှင်၏မျက်နှာကိုအတန်ကြာစူးစိုက်ကြည့်ရှုပြီးမှ ဘယ်လောက်ဖြစ်စေချင်လည်း ပြောပါဆရာ >>>ဖယ်ရှားလိုက်ပုံက>>> မြေးဖြစ်သူ၏လည်ချောင်းအတွင်း အိမ်ရိုက်သံတစ်ချောင်းဝင်သွား၍ ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်းတစ်ခန်း၌ ခွဲစိတ်ဖယ်ရှား နေမှုကိုကြည့်ရှုနေသောတူဖြစ်သူအား အဘွားဖြစ်သူက ဖုန်းဖြင့်လှမ်းမေးခဲ့သည်။ ” ဘယ်လိုနေလဲ ” ” ခွဲစိတ်နေတုန်းပါပဲ ” ” ကြာလိုက်တာ ” ” ခက်ခက်ခဲခဲ ခွဲစိတ်နေရတယ် ” ” လွယ်ပါ့မလား ” ” ကြိုးစားနေကြပါတယ် ” ” အဲဒီသံချောင်းက မထွက်သေးဘူးလား ” ” ဟာ….. ထွက်သွားပြီ ” ” ဟဲ့…. ဘာထွက်သွားတာလဲ သံချောင်းလား… ” ” ဟုတ်ဘူး…. အသက် ” >>>သြော် အလုပ်>>> Company တစ်ခုတွင်အလုပ်ချိန်ဝင်ချိန်အမြဲတမ်းနောက်ကျရောက်ပြီးအိမ်ပြန်ချိန်စော၍ပြန်တတ်သည့်ဝန်ထမ်း တစ်ဦးအား မန်နေဂျာကခေါ်ယူသတိပေးလေသည်။ ” အလုပ်ဝင်ချိန်နောက်ကျပြီး ပြန်ချိန်ကျတော့ စောနေတယ် ” ” ဟုတ်ကဲ့ပြင်ပါ့မယ် ” ” နေ့လည်မှာလည်းလက်ဖက်ရည်သောက်ချိန်၊ ထမင်းစားချိန်၊ စကားပြောချိန်တွေကများပြီး အလုပ်ချိန်ကနဲနဲပဲ ရှိနေတယ် ပြင်ပါ ” ” ဟုတ်ကဲ့ပါ ” ” တစ်နှစ်လုံးမှာ ခင်ဗျားအလုပ်ချိန်ကနဲနဲလေးပဲရှိနေတယ် ဒါကြောင့်…မနက်ဖြန်က တစ်နှစ်လုံးရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ပဲ ၈နာရီအပြည့်အလုပ်လုပ်ရမယ် ” ” မနက်ဖြန်ကျွန်တော့်နားရက်ပါဆရာ